Wararka | Beyin xirxirida | warshad bacda cuntada
Sidee loo go'aamiyaa cabbirka kiishka baakadka cuntada ee dabacsan?
Intii aan ku jiray warshadaha baakadaha sannado badan, Su'aasha ugu badan ee la isweydiiyo ayaa ah sidee loo go'aamiyaa cabbirka boorsadeyda
Baakaduhu waa cunsur muhiim u ah shey kasta, iyo xitaa go'aamiyaha muhiimka ah ee go'aamin kara in alaabtaada si fiican loo iibin karo iyo in kale. Marka naqshadeynta baakadaha aad ayey muhiim u tahay. Caadi ahaan, waxaad weydiisan kartaa naqshadeeyaha xirfadlaha ah inuu kuu qaabeeyo farshaxanka, oo ay ku jiraan macluumaadka aad rabto inaad u sheegto macaamiisha, astaantaada iyo midabka aad rabto inaad isticmaasho, shaqooyinkan waxaa qaban kara dad xirfadlayaal ah, uma baahnid inaad ka walwasho .
Laakiin qaybta adag ee cusub ayaa ah sida loo go'aamiyo cabbirka boorsadeyda? Qof ayaa laga yaabaa inuu si toos ah u aado suuqa si uu uga helo boorsooyinka baakadaha ee alaabada la midka ah oo uu tixraaco cabirradooda.
Laakiin adiga oo si adag ugu baahan qayb kasta oo ka mid ah alaabta, waxaad runtii dooneysaa inaad sameyso cabir ku habboon alaabtaada. Waqtigaan, marka lagu daro tixraaca badeecooyinka suuqa yaal iyo dhageysiga soo jeedimaha alaab-qeybiye bacaha wax lagu rito, waxaad si fudud u isticmaali kartaa warqad Ama filim caag ah si aad u sameysato boorso fudud oo rakibidda tijaabada ah si loo go'aamiyo cabbirka saxda ah. Halkan waxaan ku bari doonaa sida loo isticmaalo warqadda si loo sameeyo boorso wax lagu rido oo fudud si loo tijaabiyo sheyga.
Nooca bacda wax lagu rito
Ugu horreyntii, waa inaan fahanno noocyada baakadaha wax lagu rito ay yihiin. Guud ahaan marka la hadlayo, bacaha baakadaha lagu rido waxay u qaybsan yihiin boorsooyin fidsan, boorar istaaga, boorsooyin dhinaca-gusset ah, boorsooyin hoose oo fidsan, iyo boorsooyin gadaal laga xidhay. . Boorsooyinka qulqulaya ee buuxiya cabitaanka, waxaa loo kala saari karaa inay yihiin boorsooyin istaaga. Bacaha hawo-qaadashada, bacaha dib-u-celinta iyo boorsooyinka qaboojiyaha guud ahaan lagu tilmaamay inay yihiin boorsooyin fidsan ama boorsooyin dhinaca-gusset ah. Aynu mid mid u soo bandhigno:
1.Boorsooyin fidsan: oo sidoo kale loo yaqaan bacaha barkinta, saddexda dhinacba way shaabadaysan yihiin, waxaad ku ridi kartaa badeecada furitaanka, Bacaha Vacuum, bacaha dib u celinta iyo bacaha qaboojiyaha badanaa waxay isticmaalaan bacda noocaan ah maxaa yeelay majiraan xagal indho la'aan ah, hawadana si fudud ayaad uga soo saari kartaa .Sidoo kale waxay ku habboon tahay sheyga yar ee yar yar, sida budada, cunnada fudud, nacnaca, iwm .Waxaa lagu laalaadin karaa shelf ama lagu seexan karaa shelf si loo muujiyo, waana sahlan tahay in lagu rido sanduuqa maxaa yeelay wuu fidsan yahay.
2 ..Istaag boorsadawaa: kaas oo kaligiis istaagi kara shelf, waxaa jira gusset hoose, oo lagu bixin karo kharashka ka dib marka la buuxiyo badeecada, oo ay fududahay in la is dul taago shelf iyo muuqaalka.Waa mid aad loo jecel yahay, kuna habboon jajab, nacnac, shukulaatada, lowska, miraha la qalajiyey, budada, shaaha, cuntada fudud ee xayawaanka, dhadhanka, geedaha, xashiishka iwm Bacda baakada noocan ah waa in la buuxiyo wax soo saar yar yar ilaa miisaanka dhexdhexaadka ah iyo bacda qulqulaya sidoo kale waa nooc boorsada istaaga. farshaxan qurux badan iyo qalab waara, bacda baakadaha noocan ah ayaa aad loo farsameeyaa marka lagu soo bandhigo shelf.
3.Gabadhka gusset dhinacwaa:waa nooc ka mid ah kiish yar oo labada dhinac isku laaban yihiin, labadan dhinacna waa la kordhin doonaa ka dib marka la buuxiyo alaabta, oo caan ku ah kafeega, bariiska iyo wixii la mid ah, oo aad ugu habboon lebenka bariiska, sidoo kale waxay noqon kartaa bacda faakiyuumka waa qaabkaaga wax soo saarka ayaa ka sii laba jibbaaran, waxay noqon doontaa mid aad u qurux badan.
Boorsooyinka hoose ee fidsan:kiishkan noocan oo kale ah ayaa caan ka ah suuqa, maxaa yeelay sagxdiisu waa fidsan tahay, oo waxay ku istaagi kartaa shelf shelf, iyo Bacda noocan ah waxay gaari kartaa 11 dhinac oo loo isticmaali karo daabacaadda, meel ku filan oo lagu soo bandhigo macluumaadka waxaad u baahan tahay inaad ku daabacato boorsada. Bacda noocan ah guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu qabto alaabooyin awood badan leh, sida cunno bisad oo karti weyn leh, cunnada eyga, kafee, iwm. Si kastaba ha noqotee, nidaamka oo adag awgood, qiimaha boorsadani waa mid aad u sarreeya, laakiin weli aad u qurux badan si loogu muujiyo khaanadaha.
5.Back bac xiran: Bacda dambe ee shaabadaysan waxay ku shaabadaysan tahay shandada, qaabku wuxuu lamid noqon karaa boorsooyinka fidsan ama dhinacyada jeexjeexyada dhinaca.Haddii aad haysato mashiinka wax lagu duubo oo kuu gaar ah, waad iibsan kartaa duubista filimka si aad u soo saarto bacda gadaasheeda gadaal ka xiran oo si toos ah ugu soo xirta badeecada.
Sidee loo laalaabaa bacda baakadaha iyadoo la isticmaalayo warqad ama filim caag ah?
Marka xigta Aynu soo bandhigno sida loo laalaabo bacda baakadaha iyadoo la isticmaalayo warqad ama filim caag ah oo ku saleysan cabbirka aad ka soo xigto bacda baakadaha la midka ah ama alaab-qeybiyaha baakidhka kugula talinayo
1.Koob jeex ah: Qaado warqad balac u dhiganta balacda jawaankaaga, dhererkuna waa labo jeer sida dhererkaaga bacda uu yahay, iskuna laab laab, ka dibna isticmaal koolo ama stapler si aad u hagaajiso labada dhinac, ka dibna boorso fudud oo siman ayaa noqon doonta.
2. Kordhi boorsada:Qaado warqad balac u dhiganta balacaaga boorsada, dhererkuna waa labo jeer sida dhererkaaga bacda oo lagu daray balac hoose oo gusset ah, ka dibna kala bixi warqada, iskaga laab dusha sida waafaqsan dhererka boorsada, waxaadna helaysaa kalabax, ka dib fur warqadda, ka dibna laab hoosta warqadda iyadoo la raacayo dhererka boorsada, si aad u leedahay laba meelood. Warqadda u rogo si aad u xoqdo labada waji, mar riix, ka dibna ku hagaaji labada dhinac koollo ama jaranjarooyin, ka dib waxaad helaysaa boorso iskeed isu taageerta.
3.Gabadhka gusset dhinac:Qaado warqad ballackeedu yahay laba jeer balacaaga balaadhkiisa, dhererkiisuna u dhigmaa dhererkaaga bacda, iskuna laabo bidix ilaa midig, ku hagaaji koollada ama jaranjarada, ka dibna ku dheji xariiq laab ah oo ah 1/2 ballac ballac ah bacda dhinaceeda, rog warqadda, isla shaqana ku samee bidix iyo midig dhinacyada bacda. Ka dib markaad sawirto, u laabo dhinaca bidix gudaha si khadadka isku laaban ee xagga hore iyo xagga dambe ee labada dhinac ay isugu beegmaan, u riix, ka dibna ugu celi isla tallaabada dhinaca midig, ka dibna ku hagaaji gunta xabagta ama jaranjarada. Sidan oo kale, bac fudud oo afar gees leh oo shaabadaysan ayaa diyaar ah.
4 Kiishka hooseAdoo raacaya talaabada kor ku xusan si aad u sameysatid boorso istaag ah adigoon wax hagaajin ah, ka dib qaado laba warqadood oo balac u dhigma ballaca gusset, dhererkuna wuxuu u dhigmaa dhererkaaga bacda, waxaan ugu yeernaa warqad dhinac ah, ka dibna istaag hal gabal oo warqad dhinac ah bidix dhinac ka mid ah boorsada istaag, oo hagaaji salka iyo dhinacyada, ka dibna samee wax la mid ah dhinaca midig, ka dib waxaa jira boorso fudud oo fidsan.
5.Back kiish xiran: Qaado warqad balackeedu yahay laba jeer balacaaga balac + 2cm, dhererkiisuna u dhigmaa dhererkaaga bacda, ka dibna dhanka bidix laab laab 1/2 balac ah, isku mid ah dhanka midig, ka dibna isku laab aag 1cm ah oo labadan qayb isku laaban, ka dib hagaaji meesha wax lagu xiro waa ok.
Haddii aadan ku qanacsanayn cabbirka bacda ee ay soo jeediyeen alaab-qeybiyahaaga bacda, ka dib tijaabada rakibidda, waxaad dooran kartaa nooca boorsada aad jeceshahay oo aad ganaax-u rogto cabirka oo aad mar kale isku daydo. Xusuusnow waa inaad tijaabisaa badeecada kahor intaadan go'aan ka gaarin cabbirka kiishka, hubina in cabbirka bacda aysan wax dhibaato ah ku heyn alaabtaada. Dhumucda iyo walxaha bacda ayaa si buuxda u raaci kara soo-jeedinta soo-saaraha baakadka, ka dibna weydiiso muunad bac ah oo u dhiganta maaddada iyo dhumucda si loo xaqiijiyo tayada bacda. Xirxirida Beyin waxay leedahay 20 sano oo baakidh soosaaris khibrad ah. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, waxaad ka heli kartaa jawaabo xirfad leh halkan si ay kaaga caawiyaan inaad sameysato boorso wanaagsan.